Fantatr'i Jesosy tsara ianao - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2019-03 > Fantatr'i Jesoa marina tsara anao
Mihevitra aho fa mahalala tsara ny zanako vavy. Niara-nandany fotoana be izahay ary nankafizinay izany. Rehefa nolazaiko taminy fa azoko ny heviny dia hoy ny navaliny ahy: «Tsy fantatrao ahy marina ianao!» Avy eo dia lazaiko aminy fa fantatro tsara tokoa izy satria izaho no reniny. Nahatonga ahy hieritreritra izany: tsy tena mahafantatra olona hafa isika - ary tsy mahalala izany koa izy ireo. Mora mitsara na mitsara ny hafa isika raha mifototra amin'ny fomba fijerintsika hoe mahafantatra azy ireo isika, saingy tsy raisina ho nahalehibe sy niova izy ireo. Entinay ao anaty boaty ny olona ary toa fantatray tsara hoe iza ireo rindrina sy zorony no manodidina azy ireo.
Manao izany koa isika amin'Andriamanitra. Ny maha-akaiky sy mahazatra indrindra dia mitondra fitsikerana sy fahamarinan-tena. Tahaka ny itondrantsika matetika ny olona arakaraka ny fomba andinihantsika ny fihetsik'izy ireo - mifanaraka amin'ny fanantenantsika - dia mifanena amin'Andriamanitra ihany koa isika. Mihevitra izahay fa fantatsika ny fomba hamaliany ny vavakay, ny fomba itondrany ny olona ary ny fomba fiheviny. Matetika isika no mamorona sary azy momba azy, alao sary an-tsaina hoe nitovy amintsika izy. Rehefa manao izany isika dia tsy mahalala azy tsara. Tsy mahafantatra azy mihitsy isika.
Nilaza i Paul fa tsy sombiny afa-tsy sary izy ary tsy afaka mahita ilay sary manontolo: «Hitantsika ao anaty fitaratra ao anaty sary ankehitriny isika; fa mifanatrika mifanatrika. Ankehitriny dia fantatro tsirairay ny sombintsombiny; fa rehefa afaka izany dia hahafantatra toy ny ahafantarana ahy aho (1 Kor. 13,12). Ireo teny vitsivitsy ireo dia milaza zavatra betsaka. Voalohany indrindra: indray andro dia ho fantatsika izy tahaka ny efa fantany antsika. Tsy azontsika Andriamanitra, ary azo antoka fa zavatra tsara izany. Azontsika atao ve ny mahafantatra ny momba azy rehetra amin'ny maha olombelona antsika ankehitriny - amin'ny fahaizantsika olombelona maotina? Amin'izao fotoana izao dia mbola tsy takatry ny saintsika Andriamanitra. Ary faharoa: fantany isika ao anaty, na dia amin'ilay toerana miafina izay tsy misy olona afaka mijery aza. Fantany izay mitranga ao anatintsika - ary maninona no misy zavatra manetsika antsika amin'ny fombantsika manokana. Niresaka momba ny fahafantaran'Andriamanitra azy tsara i David: «Mipetraka aho na mifoha, fantatrao; azonao lavitra ny eritreritro. Mandeha na mandainga aho, ka manodidina ahy ianao ary mahita ny lalako rehetra. Fa, indro, tsy misy teny eo amin'ny lelako, Tompoko, izay tsy fantatrao. Manodidina ahy amin'ny lafiny rehetra ianao ary mitazona ahy ny tananao. Mahafinaritra loatra ity fahalalana ity ary avo loatra ho ahy, tsy azoko izany » (Salamo 139,2: 6). Azoko antoka fa afaka mampihatra ireo andininy ireo amin'ny tenantsika isika. Natahotra ve ianao? - Tsy tokony ho izany! Tsy toa antsika Andriamanitra. Indraindray dia mihodina amin'ny olona bebe kokoa isika rehefa mahafantatra bebe kokoa azy ireo, saingy tsy manao izany mihitsy izy. Tian'izay te ho fantatra rehetra, te ho maheno ary hoheverina. Mieritreritra aho fa izany no antony mahatonga ny olona maro manoratra zavatra ao amin'ny Facebook na vavahadin-tserasera hafa. Samy manana ny zavatra holazaina ny tsirairay na misy mihaino na tsia. Izay rehetra manoratra zavatra ao amin'ny Facebook dia manamora izany; satria afaka manolotra ny tenany araka izay tiany izy. Tsy hanolo fialamboly mifanatri-tava foana anefa izany. Misy olona afaka manana pejy eo amin'ny Internet izay miditra matetika, saingy mbola afaka manirery sy malahelo izany.
Ny fiainana miaina amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia manome antoka fa ho re, fantatsika, takatra ary ho fantatsika. Izy irery no afaka mijery ny fonao ary mahalala ny zavatra rehetra efa noeritreretinao mihitsy. Ary ny zavatra mahafinaritra dia hoe tia anao foana izy. Rehefa toa mangatsiaka sy tsy misy dikany ny tany ary mahatsiaro ho manirery sy tsy mahatoky ianao, dia afaka manovo tanjaka avy amin'ny fahatokisana fa misy farafaharatsiny mahafantatra anao tsara.